Maalintii koobaad ee Shirwaynaha 2aad ee UCSO oo Guul kusoo dhamaaday.
Maanta oo ay Taariikhdu ahayd 18.01.2020, waxaa Kuliyada Farsamooyinka ee Dagmada Dhagaxbuur ka bilawday, Shirwaynihii Labaad ee Ururka Culimada S/ogadeniya (UCSO) oo Markii ugu Horaysay lagu qabtay Dalka Gudihiisa gaar ahaan Gobalka Jarar Caasimadiisa Dhagaxbuur
Waxaa ka soo qaybgalay Ergooyin tiro badan oo ka kala yimid gobalada kala Duwan ee dalka, Dibadiisa, Madax ka socotay JWXO oo uu hogaaminayey Halgame Maxamed Cabdiyaasiin Diirane Kuna wehelinayey Garaad Bashiir Axmed Makhtal, Naftoodhurayaasha, Hooyooyinka iyo Marti sharaf kale.
Ugu horayn waxaa lagu furay Wacdi diini ah iyo Kalmada Gudoomiyaha gudiga Qaban qaabada Shirwaynaha, Sheekh Xasan Raage.
Kadibna waxaa Codbaahiyaha lagu soo Dhaweeyey, Gudoomiyaha ururka Culimada, Sheekh Maxamed Irshaad oo Hadalo kooban oo ubadan wacyi galin iyo Hawlaha uu Ururku qabto,madasha ka jeediyey.
Intaas kadib waxaa lagu soo Dhaweeyey Halgamayaasha kala ah Maxamed Cabdiyaasiin Diirane iyo Garaad Bashiir Axmed Makhtal oo si hufan uga hadlay Muhiimada Shirwaynaha iyo Kaalinta Culimada kaga aadan iska dulqaadka Dulmiga,Jahliga iyo wacgalinta Bulshada.
Sidoo kale waxaa Shirka ka hadlay Gudoomiyaha Unugta JWXO ee Gobalka Jarar Halgame Cabdiraxmaan Khaliif Xeef oo si diiran u soo dhaweeyey Dadwaynaha shirka ka soo qaybgalay.
Sheekh Maxamed Baaruud oo kamid ah Gudiga fulinta UCSO ayaa soo bandhigay Taariikhda Ururka Culimada iyo Mudadii uu jiray waxqabadkiisii.
Galinkii danbe ee Maanta waxaa dadwaynihii ka hadlay ka mid ahaa qaarka mid ah Culimada ugu Caansan Gobalka sida Sheekh Cabdiraxmaan Qalinle iyo Sheekh Cabdulaahi Yare.
Waxayna labadooduba diirada Saareen alle ka Cabsiga iyo in Guusha lagu gaadho Midnimo.
Waxaa isaguna hadalo qiimo badan Shirka ka soo jeediyey, Xoghayaha ururka OYSU Halgame Cumar Sooya.
Waxaan meesha ka maqnayn kaalintii Hal abuurka, Abwaan Cagjar ayaa gabay Qiimo badan oo lagu diirsaday, Shirwaynaha ku soo bandhigay.
Guntii iyo Gunaanadkii Maalintii Koowaad ee Shirwaynaha Labaad ee UCSO oo Muxaadarooyin badan iyo Hadalo Qiimo badan lagu soo bandhigay ayaa ku soo dhamaaday Guul iyo Rayn rayn.
January 18th 2020, 9:45 am